Best Hotels Near Train Stations Na Italy | Save A Train
Home > Inzọ Njem Italytali > Best Hotels Near Train Stations Na Italy
Italy, otu n'ime Europe kasị ewu ewu ezumike ebe, nwere ya niile. A ọgaranya omenala akụkọ ihe mere eme, dara oké ọnụ hotels, ụwa na-ama nri, ije, saịtị ndị mara mma ... na mgbe ahụ, e shopping! Ejegharị ejegharị na-Italy ụgbọ okporo ígwè bụ a breathtaking ahụmahụ. Ị ga-esi na-enwe nile nke mara mma n'ụzọ kama ụra iburu gị anya na a ụgbọelu. Ozugbo ị na-eru gị họọrọ obodo, e nwere ọtụtụ ọmarịcha ebe ịnọ. Iji mee ka gị na njem ihe adaba, anyị na-na mechie ụfọdụ ukwuu-gosiri hotels - ọ bụla n'ime ha a mere nso n'ebe ahụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ndị a bụ ndị Best hotels nso n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Italy.
Mbụ anyị Best hotels nso n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Italy na- – Firenze Santa Maria Novella Train Station na Florence
The Grand Hotel Minerva bụ nnọọ 300m si Florence si Santa Maria Novella Train Station. Nke a mere eme na hotel ụbọchị laghachi na 19nke Century na nwere a n'elu ụlọ Ofel-anọ na-akụkọ ihe mere eme na etiti nke Italy Renaissance obodo, Florence.
Nke a hotel bụ zuru okè oke maka njem mmasị art, omenala, na nri. Ọ bụ a nkeji ole na ole si na niile isi na saịtị. Ị pụrụ ịhụ Santa Maria Novella nri n'èzí gị n'ihu ọnụ ụzọ, na n'ime nanị otu kilometa, ị nwekwara ike ịga na Florence Cathedral, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio na Pitti Obí.
Achọ ụfọdụ shopping ma ọ bụ a aru eri? Were a stroll ka San Lorenzo ahịa ma ọ bụ Sant'Ambrogio ahịa na-eme ka n'aka na ileta Buca Maria ma ọ bụ Gelateria la Carraia maka nri.
Verona na Florence Ụgbọ oloko
Milan Porta Garibaldi Train Station na Milan
Ejiji bụ aha nke egwuregwu na Milan - ya mere ebe mma ịnọ karịa trendy Tocq Hotel? The nkwari akụ na-emi odude ke Central Milan, otú ahụ ka famed Via Montenapoleone, Castello Sforzesco na La Scala Ụlọ ihe nkiri niile n'ime a 2km okirikiri, na-eme ka ndị nlegharị anya na-adị mfe walkable. The Duomo Milan bụkwa dị nso, nanị ihe karịrị 2km pụọ.
Ị ga-achọ gaba na-enweta na-akpali akpali nightlife nke ama Corso Como n'okporo ámá, dị nnọọ 100 mita. N'ezie, Corso Como na-ekwo ekwo site ụbọchị - tinyere hip Ogwe na nightclubs, a vibey agafe agafe n'okporo ámá na-anya isi elu mbiet na-echekwa na Gọọmet ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Mere zụọ ahịa? Anyị na-adịghị na-ata ụta ị! Nye Via Vincenzo Capelli n'okporo ámá na Brera district a nleta.
Best hotels nso n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Italy – Naples – Central Train Station
Ikpeazụ anyị Best hotels nso n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Italy bụ The Una Hotel Napoli, ihe n'ezie weghachiri mere ụlọ dị abụghị Central ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Naples. Enwe a ọṅụṅụ na nkwari akụ mmanya Ofel, nke nwere a echiche nke Vesuvius gbawara ugwu mgbawa. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi na a nta nso na-ele, ị pụrụ a obere ụgbọ okporo ígwè ịhụ Pompei na Ugwu Vesuvius gbawara.
E nwere ọtụtụ ịrịba akụkọ ihe mere eme ebe dị nso, n'ihi ya, jide Naples a aba ọnụnọ ma ọ bụrụ na i nwere ike. Ị ga-enwe ike ije ije na Katidral nke Naples, Santa Chiara, San Gregorio Armeno, San Lorenzo Maggiore, National Archaeological Museum, nakwa dị ka Duomo n'okporo ámá na akụkọ ihe mere eme n'etiti obodo. Ị pụrụ ọbụna na-aga n'okpuru obodo n'ọnụ Napoli Sotterranea.
Bari na Naples Ụgbọ oloko
Rome na Naples Ụgbọ oloko
Roma Termini Train Station na Rome
The charming NH Collection Roma Palazzo Cinquecento is a 5-star beauty is situated close to Rome’s main train station and has views over the gardens and ancient ruins of Mura Serviane. Ọ bụrụ na ị na-eche dị ịgagharị ebighi obodo ụkwụ, ị na chi. I nwere ike isi otú ọtụtụ nkiri nso karịa 2km pụọ: Egwuregwu nke dị n'Ogige, Spanish Nzọụkwụ, Trevi Iyi, National Museum nke Rome, Teatro dell'Opera di Roma, Santa Maria Maggiore, Church nke Santa Susanna, na Spanish Nzọụkwụ.
Ọ bụrụ na ị bụghị na ike gwụrụ mgbe niile na nlegharị anya, hop na a ụgbọ ala na isi obodo a ma ama Via del Corso nke obụrede mbụre shopping site ụbọchị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Ogwe na klọb n'abalị. Anyị na-n'aka na ị ga-n'anya na ọnụnọ gị na ihe ọ bụla nke Best hotels nso n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Italy.
Ị gara ọ bụla tupu? Ka anyị mara site tweeting anyị na @SaveATrain! ajụjụ ọ bụla? Kpọtụrụ anyị na SaveATrain.com na ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ Best hotels nso n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, pịa ebe a.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-hotels-near-train-stations-in-italy/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ya / de ma ọ bụ / pl na ndị ọzọ asụsụ.
I live to travel and to tell about my journeys and what I have experienced - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m